China Soft PVC Labels orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | SJJ
Ny labozia malefaka amin'ny PVC dia antsoina koa hoe marika vita amin'ny fingotra ataon'ny olona sasany. Ny endriny dia isan-karazany amin'ny loko mitambatra. Miaraka amin'ny fampiasana samihafa, ny tohana dia mety ho vy, taratasy, kasety adhesive, plastika mafy, Velcro na koa tsy misy tohiny fa mamela tsipika manjaitra eo anoloana mba manjaitra akanjo, kitapo ary lamba hafa. Ny marika malefaka PVC no entana tsara indrindra hanehoana marika manan-danja amin'ny marika.
Antsoina koa ny marika malefaka PVC marika vita amin'ny fingotraataon'ny olona sasany. Ny endriny dia isan-karazany amin'ny loko mitambatra. Miaraka amin'ny fampiasana samihafa, ny tohana dia mety ho vy, taratasy, kasety adhesive, plastika mafy, Velcro na koa tsy misy tohiny fa mamela tsipika manjaitra eo anoloana mba manjaitra akanjo, kitapo ary lamba hafa. Ny marika malefaka PVC no entana tsara indrindra hanehoana marika manan-danja amin'ny marika.
Miaraka amin'ny loko feno 2D na 3D endrika, ny marika PVC malefaka dia azo amboarina amin'ny endrika isan-karazany arak'ireo mpamorona. Ny antsipiriany kely dia azo atao pirinty afa-tsy ny loko fenoina hahatonga ny labels ho zava-misy bebe kokoa.
Fonosana: kitapo 1pc / poly, na arakaraka ny angatahinao
Teo aloha: Badge Pin PVC malefaka
Manaraka: Magnetan'ny vata fampangatsiahana PVC malefaka
Mpanamboatra labozia akanjo
Labels amin'ny akanjo manokana
Famaritana marika Custom
Labels Pvc Ho an'ny Akanjo
marika vita amin'ny fingotra
malefaka PVC Labels